Biyyoonni gaanfa Afrikaa naannichatti nageenyaa fi diinagdee itti fufsiisuuf hojjechuu akka qaban ibsame – Fana Broadcasting Corporate
Biyyoonni gaanfa Afrikaa naannichatti nageenyaa fi diinagdee itti fufsiisuuf hojjechuu akka qaban ibsame
Finfinnee, Sadaasa 2, 2012 (FBC) – Biyyoonni gaanfa Afrikaa naannichatti walitti hidhaminsa nageenyaa fi diinagdee itti fufsiisuu dhimmoota danda’an irratti hojjechuu akka qaban ibsame.
Af-yaa’iin mana maree bakka buutoota ummataa FDRI obbo Taaggasaa Caafoo jila Af-yaa’ii paarlaamaa Somaaliyaa Mahaammad Mursaalee durfamu waajira isaanitti simachuun haala yeroo irratti waliin si’a mari’ataani dubbataniiru.
Af-yaa’iin mana maree bakka buutoota ummataa FDRI obbo Taaggasaa Caafoo hariiroon Somaaliyaa Ityoophiyaa waliin qabdu ollummaa qofa otuu hin taane ummata obbolaadha jedhaniiru.
jila Af-yaa’ii paarlaamaa Somaaliyaa Mahaammad Mursaalee durfamu gar Ityoophiyaa dhufuun hariiroo biyyoota lamaanii caalumatti akka cimuuf gargaara jedhaniiru.
Af-yaa’ii paarlaamaa Somaaliyaa Mahaammad Mursaalee gama isaanitiin mootumaan Ityoophiyaan kanaan dura nageenya, haala qabinsa mirga namoomaa fi dhimmoota kana fakkataan irratti deeggarsa taasisaa turuu ibsaniiru.
Buufanni too’annoo Gumurukaa dhaamaatiif nu saaxile – Konkolaachiftoota